Arịrịọ aka - Ihe niile ị ga-agabiga maka nnukwu ụbọchị | Bezzia
Susana godoy | | Agbamakwụkwọ
Ime ememe arịrịọ gị maka aka bụ ihe ọzọ n'ime nnukwu omenala ndị a ka na-agbaso taa. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na protocol adịkwaghị ka ọ dị na mbụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga-aga mgbe niile na uto nke di na nwunye ahụ, ma n'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-enye gị usoro echiche ka i wee nwee ike ịhazi oge nke. arịrịọ gị maka aka na nkọwa niile.
Maka mgbe anyị mara ọkwa agbamakwụkwọ anyịA na-enwe oge pụrụ iche ma ọ bụghị onye ọ bụla na-alaghachi azụ n'ụbọchị buru ibu. N'ihi ya, anyị nwere ike iso ndị anyị na-eme ihe ọ bụla anyị na-eme. Usoro obi ụtọ nke anyị na-achọ ịkekọrịta mgbe niile na n'ihi nke a, a gaghị ahapụ arịrịọ gị maka aka.
1 Gịnị bụ arịrịọ maka aka
2 Kedu ihe a na-eme na atụmatụ maka aka
3 Ihe a ga-enye di na nwunye
4 Ogologo oge ole ka ọ dị tupu agbamakwụkwọ ahụ?
Gịnị bụ arịrịọ maka aka
Mgbe ụfọdụ Anyị nwere ike ime ntakịrị nsogbu na atụmatụ maka aka na oge nke ịrịọ maka alụmdi na nwunye. Ọ bụ ezie na di na nwunye ọ bụla nwere ụfọdụ echiche na ndị ahụ bụ nke ha ga-emerịrị, n'ihi na ọ dịghịzi usoro iwu dị ka n'oge ochie. Malite na nke a, ọ bụ ezie na ịrịọ maka alụmdi na nwunye bụ oge a kapịrị ọnụ mgbe akụkụ nke di na nwunye kwupụtara onwe ya ma kwuo echiche ahụ dị mkpa. Ma arịrịọ maka aka bụ oge ọzọ nke ememe, nke izute ndị ị hụrụ n'anya nke a na-eme ememe ahụ. Ogologo oge gara aga, ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya karị, n'ihi na ọ bụ onye na-alụ nwanyị ọhụrụ na-ajụ nna nwunye maka 'ikike' ka ọ nwee ike ịlụ. N'ebe ahụ ezinụlọ nwere okwu ikpeazụ. Taa ihe niile agbanweela maka mma!
Kedu ihe a na-eme na atụmatụ maka aka
O dokwara anyị anya nke ahụ ọ bụ oriri, ọ bụ ezie na ọ dị obere karịa agbamakwụkwọ ahụ. Naanị nne na nna, ụmụnne, ma ọ bụ ezigbo ezinụlọ ga-abụ onye na-abịakwute ya. Ya mere, ị nwere ike ịme ndoputa mgbe niile na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma ma ọ bụ kwadebe oriri ụlọ nke ndị ọbịa ga-enwekwa ekele. Ọ bụ nzukọ na o kwesịghị ịdị nso na agbamakwụkwọ ahụ n'onwe ya, karịa ihe ọ bụla na-enye anyị oge iji hazie otu na ndị ọzọ na-enweghị nsogbu. Mgbe ị nwere ebe ahụ, ị ​​​​nwere ike icho mma ya n'ụzọ dị mfe na nke ịhụnanya, na okooko osisi na vases maka ememe ahụ. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ menu dịtụ iche, na-aga mgbe niile maka mkpa onye ọ bụla na-eri nri. Na mgbakwunye na nri ehihie ma ọ bụ nri abalị, e nwekwara mgbanwe onyinye n'etiti di na nwunye.
Ihe a ga-enye di na nwunye
Anyị amaworị na n'oge a na-arịọ alụmdi na nwunye mgbanaka bụ onye nọ. Ya mere, maka oge a anyị nwere ike ịhapụ nhọrọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ maka ya elekere kpochapụwo ma ọ bụ smartwatch, cufflinks, ụdị ihe ọ na-anakọta, wdg. Mgbe maka ya ị nwekwara ike ịhọrọ ọla n'ụdị ọla aka, olu ma ọ bụ choker na ọbụna ọla ntị. Ma eleghị anya, ụfọdụ ngwa dị ka eriri mara mma ma ọ bụ ọbụna akpụkpọ ụkwụ nwere ike iju gị anya. Ị nwere ike ịwụfe protocol niile wee họrọ echiche na-eju ya anya!
Ogologo oge ole ka ọ dị tupu agbamakwụkwọ ahụ?
Naanị tupu anyị kwuru na ọ bụghị nnọọ nso agbamakwụkwọ, bụrụ na ị chọrọ ime ihe mbụ na nwere ọtụtụ atụmatụ. Ma ihe dị ka lma ọ bụ karịa amamihe bụ na banyere 4 ma ọ bụ 6 ọnwa gafere si arịrịọ agbamakwụkwọ. Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ ọ na-adị iche karị ma ọ bụ na-abụghị nke ya. N'ihi na ọ ga-adabere na di na nwunye ọ bụla. Ọbụna ọtụtụ n'ime ha anaghịzi ahọrọ maka nke a ma ọ bụ ezie na e nwere arịrịọ alụmdi na nwunye ha na-aga ozugbo na agbamakwụkwọ ahụ. Ọ ga-amasị gị ịnweta atụmatụ gị n'ụdị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Agbamakwụkwọ » Mee mmemme gị n'ụdị!